छोरी लिएर बस्ने श्रीमान श्रीमतीले यस्तो सहमती गरेर मिलन गरे, बुबा आमा मिल्दा छोराछोरीको खुसिले आखा बाट आशु झारे (भिडियो सहित) – Kavrepati
Home / समाचार / छोरी लिएर बस्ने श्रीमान श्रीमतीले यस्तो सहमती गरेर मिलन गरे, बुबा आमा मिल्दा छोराछोरीको खुसिले आखा बाट आशु झारे (भिडियो सहित)
admin September 19, 2021	समाचार Leaveacomment 53 Views
भनिन्छ श्रीमान र श्रीमती भनेको एक रथका दुइ पांग्रा हुन् । जीवनमा यी दुईको वीचमा मेल हुनु एकदम आवश्यक हुन्छ । सुमधुर सम्बन्धले मात्र जीवन सहज हुने गर्दछ । श्रीमान-श्रीमती बीचको सम्बन्ध सुमधुर बनाई राख्न तपाई कहिल्यै पनि कुनै पनि हिसाबले आवेशमा आएर गलत ब्यवहार नगर्नुहोस् ।
भावनात्मक, मानसिक तथा शारीरिक कुनै पनि दृष्टिकोणले आफुलाई सँधै शान्त राख्नुहोस् । एकजना प्रसिद्ध धार्मिक ब्यक्तिले भनेका छन् , मानिसहरु कसरी आफ्ना श्रीमतीलाई कु’ट’पि’ट गर्न सक्छन् र त्यही श्रीमतीसँग राती सु’त्न सक्छन् ?
विश्वास, प्रेम, सद्भाव, सहयोग । हो, दाम्पत्य सुखका आधार हुन् यी । तर, यसमध्ये कुनै एक तत्वमा मात्र ग’डब’डी भएमा तपाईंको दाम्पत्य उस्तै रहँदैन, जस्तो हिजोको दिनमा थियो । तपाईंको खुसी लु’टिन्छ । तपाईको सुख हरण हुन्छ ।
तपाईंको सम्बन्ध दुई चिरा पर्छ । हिजोसम्म हाँसीखुसी बिताइरहेको दाम्पत्य जीवनमा आज अचानक कालो बादल म’डारिन थाल्छ । किन यस्तो हुन्छ ? के घर-परिवारले गर्दा ? सत्रुले गर्दा ? छिमेकले गर्दा ? होइन, तपाईं भित्रकै कुरुप तत्वले गर्दा । त्यो तत्व हो, अविश्वास ।
Previous पोखरामा फेरी जमिन भा’स्सीयो, ख’नेर हेर्दा देखीयो यस्तो ! के हुन लाग्यो यस्तो ? हेर्नुहोस भिडियो
Next पाथिभरा माताले सबैको मनोकामना पुरा गरुन, असोज ३ गते आईतबार, आज तपाईको भाग्य कस्तो छ हेर्नुहोस राशिफल